Axad, Janaayo 27, 2019 Axad, Janaayo 27, 2019 Becky Holton
Maxay tahay ujeedka suuqgeynta waxyaabaha? Ma ku saabsan tahay kobcinta nuxurka weyn iyo ku dhiirrigelinta kanaallo badan si loo helo dareenka dhagaystayaashaada? Hagaag taasi waa qaybta ugu weyn. Laakiin suuqgeynta waxyaabaha ayaa intaas ka badan. Haddii aad xaddiddo habka aad u aadeyso aasaaskaas, waxaad eegi doontaa falanqaynta waxaadna ogaan doontaa in waxyaabaha ku jira aysan soo jiidin taraafikada muhiimka ah. ClearVoice waxay daraasad ku sameysay 1,000 suuqley si ay u ogaato waxa caqabadaha ugu waaweynaa ee xagga waxyaabaha ka jiray ahaayeen. The